Ciidan gadoodsan oo la wareegay xerada Lama-galaay | KEYDMEDIA ENGLISH
Ciidan gadoodsan oo la wareegay xerada Lama-galaay
Yuusuf Dabageed, oo ah Madaxweyne ku xigeynka Hirshabeelle, ayaa cadaadis ku saaraya Guddiga Doorashooyinka, in ay kursiga u xiraan Samiiro, halka odayaasha iyo beesha leh kursiga Yabar-dige, ay dalbanayaan in kursiga lagu tartamo si la mid ah kuraasta kale.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, ciidamo gadoodsan ayaa waabarigii hore ee saaka xirtay albaabka laga galo xerada lama galaay oo ay deggan yihiin madaxda Hirshabeelle.
Gadoodka ciidnaka ayaa yimid, kadib markii, Guddiga Doorashooyinka Hirshabeelle iyo Odayaasha beesha leh kursiga Hop#059 ay isku fahmi waayeen hanaanka loo marayo doorashada kursigaas, oo ay saameyn ku leedahay Madaxtooyada Soomaaliya.
Ciidamadaan ayaa diiddan in kursiga HOP#059 loo xiro Samiiro Xasan Cabdulle, oo ku fadhisay baarlamaankii 10-aad, ahna, xaaska Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka, Maxamed Musral, kaas oo hadda dadaal ku bixinaya in Samiiro loo boobo kursiga.
Samiiro Xasan Cabdulle, waxa ay shanti sano ee la soo dhaafay matalaaddii loo idmaday la hoos gashay xaafiiska Farmaajo, waxayna qeyb ka ahayd, xildhibaanno si weyn ugu ololeeyay muddo kordhintii sharci darrada ahayd ee Farmaajo samaystay April 2021.
11 kursi oo Golaha Shacabka ah, ayaa baaqi ku ah hirshabeelle, waxaana la filayaa in maanta la doorto kursiga, Hop#058, oo shalay doorashadiisu u baaqatay sababo la xariira amniga qaar ka mid ah musharixiinta iyo guud ahaan goobta doorashada.
Inta badan kuraasta taalla degaan doorashada 2-aad ee Hirshabeelle, ayaa la furay, sababo la xariira, ka baaqsiga colaado mar ka kale, ka qarxa magaalada, oo ku dhawaad labo sano ay jireen jabhado ka soo hor jeeday in Guudlaawe tago Baladweyne.